Burma Partnership » National Council of the Union of Burma
Posts Tagged ‘National Council of the Union of Burma’ (13 found)
Calling ForaNationwide Ceasefire and Inviting Daw Aung San Suu Kyi to Meet with All Ethnic Nationality Organizations
The National Council of the Union of Burma (NCUB) calls for the negotiation ofaNationwide Ceasefire for the benefit of all the peoples of Burma. The ethnic nationalities and the government have all called foraceasefire. It is time to act to achieve the goal of peace […]
November 9, 2011 • By National Council of the Union of Burma • Tags: Armed Conflict, Ceasefire, National Council of the Union of Burma • Read more ➤
For more than six decades, successive juntas have waged military and political war in many manners within Burma. In their latest military attacks, fighter jets from Russia and helicopters from India bought with funds received from offshore oil and gas ventures are being used against ethnic nationalities […]
July 31, 2011 • By National Council of the Union of Burma • Tags: Armed Conflict, Dialogue, National Council of the Union of Burma • Read more ➤
Burmese pro-democracy activists have called on Indonesian human rights organizations and the House of Representatives to denounce this year’s elections in the military-run state […]
May 30, 2010 • Tags: 2010 Elections, Burma Partnership, Indonesia, National Council of the Union of Burma • Read more ➤
Myanmar may descend into chaos post-election: Civil groups
Myanmar, spiralling the junta-led country further into chaos, ethnic leaders and civil groups said […]
May 27, 2010 • Tags: 2010 Elections, Burma Partnership, National Council of the Union of Burma • Read more ➤
Ethnic paramilitary groups and the wider population may rebel after the planned 2010 election in Myanmar, spiralling the junta-led country further into chaos, ethnic leaders and civil groups said Wednesday […]
နအဖ စစ်အုပ်စု၏ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပေဒေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သဘောထား ထုပ်ပြန်ချက်
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီမှ နအဖ စစ်အုပ်စု၏ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပေဒေ တရပ်ထုပ်ပြန်လိုက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့၏ သဘောထား ထုပ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ ထိုထုပ်ပြန်ချက်တွင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်သွားရန် ခိုင်မာသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မတ်လ(၈) ရက်နေ့တွင်ထုပ်ပြန်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကိုလေ့လာသုံးသပ်ရာတွင်လည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်ရေး၊ တရားဝင်ဖြစ်ရေးကိုသာ အဓိက ရည်ရွယ်ထားသည့် နအဖ၏ဥပဒေ ဖြစ်နေခြင်း စသည့် ဒီမိုကရေစီနှင့်မညီသော အချက်များကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရသဖြင့် လုံးဝလက်ခံနိုင် ခြင်းမရှိသဖြင့် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အပါအဝင် စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသစ်ကြီးပေါ်ပေါက် လာသည်အထိ အမျိုးသာကောင်စီသည် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရပ်လုံးနှင့် လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စသည့် ထုပ်ပြန်ကြေငြာ ချက်များပါရှိပါသည်။ […]
March 12, 2010 • By National Council of the Union of Burma • Tags: 2010 Elections, Burmese, National Council of the Union of Burma • Read more ➤